Fomba Telo Iezahan’ny Governemanta Rosiana Ifehezana ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2017 15:39 GMT
Sioka malaza indrindra ao amin'ny tontolon'ny twitter Rosiana. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Ity manaraka ity dia dikantsoratr'ilay mpanao gazety Rosiana Darya Luganskaya. Novaina ho mazava kokoa sy ny halavany ny lahatsoratra. Afaka mamaky ny lahatsoratra orizinaly ato ianao.
“Noforonin'ny CIA ho tetikasa manokana ny aterineto, ary mivoatra araka izany” hoy i Vladimir Potinina telo taona lasa izay tamin'ny herinandro teo. Nanomboka teo, vao mainka nihena ny fitokisan'ny manampahefana Rosiana ny aterineto.
Na dia teo aza izany laza ratsy eo amin'ny manampahefana izany, manan-danja amin'ny toekarenan'ny firenena kosa ny lafiny ara-barotra ao amin'ny aterineto Rosiana, mahasahana ny 1,35 arivo miliara robla (23,7 miliara dolara), na 2,4 isanjaton'ny harin-karena faobe Rosiana izy tamin'ny taona 2015, araka ny antontanisa avy amin'ny Fikambanana Rosiana misahana ny Fifandraisana Elektronika (RAEC). Raha mieritreritra marina “hitondra filaminana” ho an'ny aterineto ny manampahefana, izay nolazain'izy ireo fa iriany tokoa, dia ho ezaka tena lafo vidy izany. Nahafantatra fomba telo ny OpenEconomy mety ho azon'ny manampahefana atomboka “hamerenana ny filaminan'ny aterineto” amin'ny taona ho avy .
1. Fanarahamaso Feno Tanteraka
Amin'ny 1 Jolay 2018, hanan-kery amin'izay ny ampahany faharoa amin'ilay antsoina hoe «fonosana Yarovaya», fitambarana lalàna miady amin'ny fampihorohoroana novolavolain'ilay solombavambahoakan'ny “Duma”-m-panjakana, Irina Yarovaya, izay mampandroso fomba vaovao amin'ny fitehirizana sy famantarana ny fifamoivoizana amin'ny aterineto. Hoterena hitahiry ny firaketana an-tsoratra amin'ny antso an-tariby sy ny hafatry ny mpiserasera, ary ireo tahiry rehetra amin'ny fifamoivoizana amin'ny aterineto koa (vaovao momba izay nitsidika tranonkala, sy ny fotoana nitsidihana izany) tao anatin'ny enimbolana ireo mpamatsy tolotra, anisan'izany ny MTS, MegaFon, Beeline sy Rostelecom. Tsy maintsy omena ny sampan-draharahan'ny fiarovana izany torohay izany rehefa mitaky izy ireo.
Tena mandany vola be ny fitehirizana izany torohay izany: Manombana ny TMT Consulting fa andanian'ny tsenan'ny fifandraisandavitra Rosiana vola mitentina eo amin'ny 1700 miliara robla (29,8 miliara dolara) izany amin'ny taona 2018. Miresaka amin'ireo sampan-draharahan'ny fiarovana momba ny fomba hampihenana ny fanapariahana ny fitehirizana ho avo folo heny ny minisitry ny fifandraisandavitra, saingy mbola ho goavana kokoa ny fandaniana.
Mpandray anjara tamin'ny Fandraharahana amin'ny aterineto tao amin'ny Forum Rosia tamin'ny taona 2014. Sary: Kremlin.ru
Teren'ny fitsipika handefa ny tenimiafina amin'ny fanafenan-tsoratra any amin'ny FSB (Sampan-draharahan'ny Fiarovana Federaly) ihany koa ny mpamatsy tolotra aterineto rehefa takiana aminy izany raha tsy izany mety hiharan'ny fandoavana onitra, na dia tsy mazava tsara aza hoe an'iza ary inona no tenimiafina tian'izy ireo takiana. Nitatitra kosa ny Kommersant tamin'ny volana Septambra fa miezaka mitady fomba hamahana ny fifamoivoizana rehetra amin'ny aterineto ao Rosia ny FSB amin'ny fampiasana ny Fonosana Fanarahamaso Lalina ( Deep Packet Inspection )(DPI), na dia eo aza ny zava-misy fa tsy dia mahomby izany raha mampiasa arofeni-piarovana https ny tranonkala, nefa maro amin'ireo tranonkala Rosiana lehibe no mampiasa izany.
Nanomboka tamin'ny volana Septambra 2015, noterena hotehirizina ao amin'ny tany Rosiana izany torohay rehetra manokana momba ny tena izany, manery ny orinasa vahiny hanontany raha te hanohy hiasa ao Rosia izy ireo na tsia. Tsy mora vidy ny lohamilina fanampiny, ary mety ho lafovidy ho an'ny mpiseraseran'izy ireo sy ny lazan'izy ireo manerantany ny fiantraikany ara-politika amin'ny fanapahan-kevitra tahaka izany.
Tamin'ny volana Novambra 2016, nakatona tao Rosia ny Linkedln noho ny fanitsakitsahana izany baiko izany. Saingy mety hiova izany – araka ny filazan'i Andrei Soldatov, mpiara-mpanoratra ny “Ny Ady hiarovana ny RuNet”, fantatra amin'ny fiarahamiasa amin'ny manampahefana Rosiana ny Microsoft, havan'ny orinasa LinkedIn. Voalaza, ohatra, fa nanome kaody ho an'ny manampahefana Rosiana ny Windows mba ahafahan'ny governemanta manohy mampiasa ny fitaovany. Toa mampitombo ny mety hanokafana ny LinkedIn ao Rosia izany amin'ny fotoana mety.
Efa ela ny Twitter no tsy nety nanaraka ity lalànan'ny fangitra tahiry ity, na dia nilaza aza ny orinasa fa eo am-pandinihana ny politika azo antoka ho an'ny mpiserasera Rosiana, ary mety handinika indray ny “toerana hitehirizany ny tahirin'ny mpiserasera Rosiana izay manana fifandraisana ara-barotra amin'ny maha-mpanao dokambarotra ao amin'ny sehatra.”Nanao fanambarana mitovy amin'izany koa ny rafitra fandefasan-kafatra Viber sy ny fampiharana Uber.
Mihevitra i Soldatov fa tsy hanome torohay manokan'ny mpiserasera any amin'ny manampahefana izany ny Facebook sy Google. Mbola tsy nandrahona hanakatona azy ireo ny Roskomnadzor, mpandrindra lehibe ny RuNet, ary nilaza koa i Soldatov fa tsy ho ampidirina ao anatin'ny lisitry ny orinasa hanaovana fanamarinana fanarahan-dalàna matetika izy ireo.
Nandray fepetra tahaka izany ny firenena sasany mba hifehezana ny aterineto, hoy i Rose Dlougatch tamin'ny Open Economy, Dlougatch dia mpiandraiki-draharaha zokiny ao amin'ny Freedom House, izay mamoaka isan-taona ny filaharan'ny fahalalahan'ny aterineto manerana izao tontolo izao. “Ao Torkia, tsy nahazo fahazoan-dalana intsony ny PayPal noho ny fandikana ny lalànan'ny fangitra. Nilaza kosa ny manampahefana Iraniana fa tsy maintsy hitahiry ny angon-drakitra ao anatin'i Iran tsy ho ela ny tolo-pifandraisana. Tany am-piandohan'ny taona 2016, nolaniana tao Kazakhstan ny lalànan'ny fangitra tahiry tahaka izany. Noho izany, azon'ny manampahefana idirana ny torohain'ny olom-pirenena ary natosika hiala teo amin'ny tsena eo an-toerana ny sehatra vahiny,” hoy i Dlougatch nanazava.
2. Manakana Tranonkala
Tamin'ny taona 2012, nanomboka nieritreritra ny manampahefana Rosiana amin'ny rafitra ahafahan'izy ireo mifehy ny aterineto—”fampidirana anaty lisitra mainty” ny tranonkala. Tafiditra ao anatin'ny lisitry ny governemanta misy ireo tranonkala voaràra noho ny fandikana ny iray amin'ireo lalàna mifehy ny votoaty an'aterineto (tahaka ireo fandraràna ny fampielezan-kevitra momba ny famonoan-tena sy ny zava-mahadomelina, na ireo mandràra ny antso hanaovana hetsika mitrifana na fampihorohoroana), nakatona ny tranonkala, matetika tsy misy fandinihana ara-pitsarana. Ny tapaky ny Aprily 2017, nanisa tranonkala 4 tapitrisa mahery voakatona tamin'izany fomba izany ny tranonkalam-baovao Roskomsvoboda misahana ny fahalalahana maneho hevitra.
Imbetsaka nandrahona hanakatona tranonkala lehibe toy ny YouTube, Reddit, Vimeo, ary Wikipedia ny Roskomnadzor (ary efa notapahana nandritra ny ora maro ny fidirana tamin'ireo tranonkala ireo). Saingy tsy mahakasika ny tranonkala iray manontolo ireo fampitandremana ireo, fa mikasika pejy manokana sasantsasany izay, araka ny filazan'ny manampahefana ho nandika lalàna iray. Raha mampiasa ny arofeni-piarovana https ny tranonkala, dia tsy afaka manakana pejy iray ihany ny mpamatsy tolotra, izay midika fa tsy maintsy manakatona tranonkala iray manontolo mandra-paha tapa-kevitry ny tompony hanaisotra ny votoaty voalaza.
Azo atao ny miditra amin'ny tranonkala voaràra amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana tsy itononana anarana tahaka ny tolotra VPN izay manafina ny adiresy IP anao, ka mahatonga anao tahaka ny mitsidika tranonkala ho avy ao Angletera fa tsy avy ao Rosia. Mavitrika mampiasa izany fitaovana tsy itononana anarana izany ny Rosiana. Ohatra, ny Amerikana ihany no mampiasa ny fitaovana tsy itononana anarana malaza Tor mihoatra noho ny Rosiana, ary efa ho 12 isanjato ny mpanjifa ny Tor no hita ao Rosia.
Tamin'ny faran'ny volana Aprily 2017, nitatitra momba ny tetkasan'ny Roskomnadzor mikendry hanakana ny fidirana amin'ny fitaovana ahafahan'ny mpiserasera mitsidika tranonkala voasakana ny Vedomosti. Na izany aza, azo sorohana tsy ho voasakana ny tolotra, raha manapaka am-panahy iniana ny fidiran'ny mpiserasera amin'ny tranonkala ao anatin'ny “lisitra mainty” ny Roskomnadzor ry zareo. Mandidy ny milina fikarohana mba hanakana ireo tranonkala voasakana tsy hiseho eo amin'ny voka-pikarohana ihany koa ny volavolan-dalàna. Azo saziana handoa onitra hatramin'ny 700.000 robla izy ireo raha tsy manaraka ny didy.
Sary: Pixabay sy ny Sampan'ny gazety Kremlin, novain'i Kevin Rothrock.
Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hametrahana fa tsy ara-dalàna ny manodina sakana sy mba hanakanana ny fitaovana lehibe tsy itononana anarana. Na izany aza, tsy mbola lasa ny fitaovana tsy itononana anarana.
Nitatitra ihany koa ny Vedomosti fa raha tokony tsy hanakana ireo tranonkala manokana ireo, azo raisina ny fepetra ho an'ny mpiserasera hanasarotana ny fidiran'izy ireo amin'ny tranonkala, ohatra ny fampandehanana ny tranonkala miadana kokoa. Saingy ho sarotra tanteraka sy lafo vidy ny manatanteraka izany. Araka ny filazan'ny Ivo-toeram-pikarohana momba ny aterineto, mitaky fitaovana manokana mety hitentina 5 miliara dolara ny mamolavola sy mampihatra ny famerana ny zotra eo amin'ny mpiserasera.
3. RuNet Mizakatena
Farany, miezaka mandamina ilay antsoina hoe “fotodrafitrasa sarotra” ao amin'ny RuNet i Rosia—toerana fifanakalozana an'aterineto amin'ny firenen-kafa sy ny anaran-tsehatra .ru sy .рф.
Roa taona lasa izay nandritra ny fivoriana tao amin'ny Vaomieran'ny Fiarovana Rosiana, nandidy ireo sampam-panjakana mba handinika ny fomba hihazonana ny fitoniana ao amin'ny RuNet i Potinina raha toa ka tafasaraka amin'ny any ivelany izany. Ary tamin'ny faran'ny taona teo, niresaka momba ny lalàna mikasika ity lohahevitra ity mihitsy ny Minisitry ny Fifandraisana sy ny FSB.
Manolo-kevitra hitondra ny zotra mankany amin'ny Rafi-Baovao Tokana an'ny Governemanta ny Minisitera, izay nolazain'ny Vedomosti fa ilaina hamantarana ny toerana misy manao zavatra amin'ny aterineto. Manolo-kevitra ihany koa ny minisitera hamindra ny toerana ifanakalozana amin'ny aterineto ho eo ambany fifehezan'ny fitantanan-draharahan'ny orinasa Rosiana irery. Farany, te-hampiditra fitsipika ihany koa ny minisitera izay mandidy fa ny mpitantana rafitra anaran-tsehatra nasionaly dia andrim-panjakana rosiana ara-dalàna sy andry mpanatanteraka manana fahefana amin'ny fifandraisana—izany hoe ny Minisitera tenany ihany.
Ny FSB, mandritra izany fotoana izany, dia nanolotra fanovana tao amin'ny fehezan-dalana famaizana [misahana ny heloka bevava] noho ny fahapotehana na fandrahonana ny fototrafitrasa ara-torohay iankinan'ny aindehiben'ny firenena—ahitana fanasaziana hatramin'ny 6 taona an-tranomaizina.
Ireo tolokevitra ireo dia samy tratran'ny tsikera henjana. Nanohitra ny planin'ny FSB ny Microsoft sy ny Cisco, ary mbola tsy nankatoavin'ny RAEC na ny komitin'ny manam-pahaizana ao amin'ny governemanta ny tolo-kevitry ny Minisiteran'ny Serasera. Tsy mbola misy lasa lalàna ireo tolo-kevitra ireo.